Moovly: Dhizaina Mhuka Vhidhiyo, Banner Ads kana Infographics | Martech Zone
Muvhuro, Nyamavhuvhu 12, 2013 Douglas Karr
Mugadziri wedu anga achishanda nesimba, achangobva kugadzira yevhidhiyo yemifananidzo yeRight On Interactive. Kunze kwekunetseka kweiyo animation, kupa mamwe emavhidhiyo kunotora maawa kushandisa zvakajairika desktop desktop maturusi. Moovly .
Moovly chishandiso chiri nyore pamhepo icho chinokutendera iwe kuti ugadzire zvemhuka zvine hupenyu pasina kuve nyanzvi yemultimedia. Kugadzira zvakapfuma midhiya zvemukati zvino zvave nyore sekugadzira PowerPoint masiraidhi. Moovly iri nyore kushandisa uye inoita kuti munhu wese aite senge multimedia pro.
Mienzaniso yekushandisa kubva ku Moovly site:
Vhidhiyo yeMavhidhiyo - Shandisa Moovly kugadzira vhidhiyo yemubatanidzwa, chigadzirwa chigadzirwa, chidzidzo chinokwezva kana sei-vhidhiyo nenzira iri nyore uye yakatwasuka. Wedzera izwi, mutinhimira uye mumhanzi uye gadzirisa zvese uchishandisa yakapusa timeline interface. Shambadzira vhidhiyo yako paYouTube, Facebook, isa pawebhusaiti yako kana kurodha pasi kuti ushandise kunze kwenyika.
Mharidzo 3.0 - Kanganwa pamusoro pemasiraidhi. Tarisa pane yako chidzidzo uye wedzera zvinoonekwa mune zvinoteedzana zvinoteedzana zvinokwezva shanduko uye maficha anobata kutarisisa kwevateereri vako. Tsigira mharidzo dzako nenzira nyowani asi yakapusa. Chinja zviri nyore mharidzo yako kuita vhidhiyo uye zvinopesana.
Ratidza Ads - Kukwezva kutarisisa nekufamba: gadzira yako pachako banner, skyscraper kana imwe animated kuratidza kushambadzira kune ako kana mamwe mawebhusaiti. Dhizaina kukwidziridzwa kwakanaka, kushambadza kana mamwe mameseji kune chero skrini: terevhizheni, kudhizaina, smartphone, piritsi,… Dzokorora imwe vhezheni kuti uite misiyano yakawanda sezvaunoda, kunyangwe mune zvimwe zviyero.
Inopindirana Infographics - Tsigira nyaya yako ne graphic visualizations yeruzivo, maitiro, manhamba kana imwe data. Shandisa machati, mepu, mifananidzo uye zvimwe zvinoonekwa zvinoonekera kuratidza maonero ako, kutsvagisa kana mishumo Gadzira yako infographic yekudyidzana: rega vateereri vako vawane rumwe ruzivo vachishandisa mbeva-pamusoro kana kudzvanya-kuburikidza nezviito, pop-ups uye kumwe kudyidzana.
Vhidhiyo Pazvinhu - Shandisa Moovly kugadzira yako wega mavhidhiyo emimhanzi. Isa mp3 mimhanzi track, wedzera mifananidzo, mimhanzi, mifananidzo kana kunyange zvidimbu zvevhidhiyo. Gadziridza mifananidzo yako kune yakarova uye utengese zvisikwa zvako kuti ugozvigovana neshamwari dzako.
E-makadhi - Dhizaina ako eanogara e-makadhi kana epamhepo kukoka chero chiitiko. Shamisa shamwari dzako uye mhuri neshoko rekutanga kana chiziviso. Sanganisa mapikicha, mifananidzo uye zvinyorwa mukumanikidza kukoka pamhepo kana zvishuwo. Shambadzira chako chakasikwa paFacebook, Youtube kana… pa Moovly!
Tags: mifananidzo infographicvhidhiyo yehupenyukuchangamukakuchikuva chikuvainopindirana infographicairwave
Vatengesi Vanotungamira kuFacebook Shambadziro Ads
Aug 12, 2013 pa 10: 06 AM
Wow, ini ndichaenda kunoongorora izvi zvechokwadi.